ညီလင်းသစ်: ကက်ပ်တိန် အသစ်ကျပ်ချွတ်
Posted by ညီလင်းသစ် au 10.6.11
party for the title of new captain ? :P
Bravo!!! Et Félicitations!!!
ပို့စ်ဖတ်ရတာ လူတောင် သင်္ဘောပေါ်လိုက်နေရသလိုပဲ သဲထိတ်ရင်ဖိုပါလား။
ကိုယ့်နိုင်ငံမှာတောင် အသစ်အဆန်းတစ်ခုကို အအောင်အရှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြိုးစားယူရတာ စိတ်ပင်ပမ်းတယ်လေ။
ဒီလိုနိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိန်ခေါ်မှု တွေကို တုန့်ပြန်ရတာလည်း လူကော စိတ်ကော ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရတာ ဘယ်လိုခံစားရမယ်ဆိုတာ မှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်။
I hope your post bring me toalot of good luck cause I also have an exam today.
ရောက်ရောက် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းအတွက် ရင်ခုန်ရတုန်း
က သူရို့တွေက စာမေးပွဲဖြင့်မဖြေရသေး အောင်လား ဆို
အပြောခံရတော့မှာပဲဆိုတဲ့ ဖိစီးမှုကြီး ဝင်လာရော...။
တခါထည်း အောင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ လုပ်ရမဲ့ အလုပ်ကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ အခန့်သင့်ရင် ဝေမျှပေးပါ။
ဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ....။ ကက်ပီတိန်ဝတ်စုံပြည့်နဲ့ပုံ တင်ပေးပါဗျိုးးးးးး
ဘယ်ပညာမဆို တတ်ထားရင် အသုံးဝင် အကျိုးရှိတာကြီးပါဘဲ
စာမေးပွဲအောင်လို့ ပျော်ရွှင်တဲ့အရသာက ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ပြန်တွေ့သလိုမျိုးနဲ့ တူတယ်ထင်ပါရဲ့း)
ကျေးဇူးပါဗျာ၊ အင်း.. ပါတီလုပ်ဖို့က ရှန်ပိန်တွေ ရေခဲသေတ္တာထဲ အခုမှ ထည့်တုန်း...၊း)
စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရနိုင်သလောက် တုံ့ပြန်ကြိုးစား ကြည့်တာပါပဲ၊ မရတော့ရင်လည်း မရတော့ဘူးလို့ပဲ မှတ်ရမှာပါပဲ၊ အခုတော့ အိုကေနေသေးတယ်၊ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်နော်...၊
Oh...I hope you'll also hearagood news for your exam. Let me know about it! :) Thank you so much for your kind words, too!
သူစိမ်းတွေ အလယ်မှာ မျိုးနဲ့ချီပြီး အပြောခံရတော့မှာပဲ ဆိုတာလေး သုံးသွားတာ သဘောကျတယ်ဗျာ၊ အင်း.. အခုတော့ ထူးစိန် မဟုတ်တဲ့ မာလိန်မှူး ပေါ့ဗျာ..အဟဲ၊
ကျေးဇူးပါဗျို့၊ စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုလို့လည်း ဝမ်းသာ ပါတယ်၊ ကျနော် ဆက်ရေးဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်..၊
ကျေးဇူးပါ အမ၊ ကက်ပ်တိန် ဝတ်စုံနဲ့ ဓါတ်ပုံဆိုလို့ Jack Sparrow လိုမျိုး ဝတ်ရင်ကောင်းမလားလို့ မျက်စိထဲ မြင်ယောင်ကြည့်နေတယ်ဗျ..၊း)
ဥပမာပေး နှိုင်းယှဉ်တာကို သဘောကျလို့ ရယ်နေမိ တယ်၊းD ကြံကြံဖန်ဖန် ပြောတတ်တယ်ဗျာ...၊ အင်း.. တကယ်လည်း အဲဒီလိုပါပဲ၊ ဖြေနေတုန်းက အကြွေးရှင် နဲ့ တွေ့နေသလိုမျိုး စိတ်ဖိစီး မှုတွေနဲ့..၊ အောင်သွား တော့ လည်း ချစ်သူဆီက အဖြေရလိုက် သလိုမျိုး တိမ်တွေပေါ် ချက်ချင်းပဲ ရောက်သွားတာ...၊း)
ကျေးဇူးပါနော်၊ အင်း ..နောက်တခါတော့ မဘေဘီဆီမှာ သင်တန်းလာတက်ပြီး စားဖိုမှူး စာမေးပွဲ ဝင်ဖြေဦးမှ ပါပဲ....။းD
CONGRATULATION captain tusk!!!!!Thanks for sharing.
ကျောင်းသားလေးကို လာဂုဏ်ပြုပါတယ် ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းးး)
အစ်ကို ကျဖူးတဲ့ စာမေးပွဲ တွေကော ရှိပါ့မလား ??
စိတ်ဝင်စားတယ်....း)).. ကျွန်တော်က သင်္ဘောပိုင်းသာလုပ်နေတာ.. သင်္ဘောမမောင်းတတ်ဘူး.. :D
Congratulations ပါ ကိုညီ။
အလုပ်က စိတ်ဝင်စားစရာပဲနော်။ တို့လဲ Pearl Habor သွားတုန်းက ရေငုတ်သဘောင်္စီးဖူတယ်။ ရေအောက်က သိပ်လှတယ်။ အလုပ်က အဲဒါမျိုးတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတော့ ပျင်းရမှာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်ထပ် အတွေ့အကြုံလေးတွေ လုပ်ပါအုံးး။
Congratulations ပါ ကိုညီလင်းရေ...
နောက်ကျရင် သဘောင်္မောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီး ဖတ်ရတော့မယ် ထင်တယ်...း))
ဝတ်စုံပြည့်နဲ့ပုံလေးလည်း လုပ်ပါအုံး... ဟီးဟီး
Congratulations ပါရှင်။ အတွေ့အကြုံတွေက ဖတ်ရတာတောင် ကြောက်စရာ သဲထိတ်ရင်ဖို ရှိလိုက်တာ။ စာမေးပွဲကတော့ ဘယ်အသက်အရွယ်ရောက်ရောက် စာတွေဘယ်လောက်ဘဲရရ ဒူးတုန် ရင်ခုန်ဖြစ်တုံးပါဘဲ။
ကိုညီလင်း ပြောမှ သိတော့တယ် ...ကျွန်တော့်မှာလည်း အကျဉ်းအကျပ် ကြောက်တဲ့ရောဂါ ရှိတယ်.....ငယ်ငယ်ထဲက ကျွန်တော် ချဉ်ထောင်နဲ့ မအိပ်တတ်ဖူး.....မဟာမြိုင်တောထဲမှာ ခြင်ဆေးခွေ အထွန်းကောင်းပြီးအိပ်လိုက်တာ ငှက်ဖျားမိပြီး မသေယုံတစ်မယ်ပါပဲ.......တစ်ခုခုကို ကျဉ်းကျဉ်းကျပ်ကျပ်ခံစားလိုက်ရတိုင်း ညဆို အိမ်မက်ထဲမှာ မြေကြီးထဲမှာ ပိတ်မိနေတာတို့ အခန်းတစ်ခုထဲကို ရောက်ပြီး တစ်ဖြည်းဖြည်း ပိတ်လာတာတို့ SAW ဇာတ်ကားတွေထဲကလို မက်တယ်......အဲဒါနဲ့လန့်နိုးတဲ့အကြိမ်ပေါင်းလည်း မနည်းဘူး.....Tunnel Rats ကြည့်ပြီးတော့လည်း စိတ်ထဲ တော်တော်နဲ့ အီလည်လည်ကြီးက မပျောက်ဘူး
ဒီသတင်းအတွက် ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူမိတယ် ညီလင်းရေ ... အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဓါတ်ပုံလေးတွေလည်း နောက်တင်ပေးဦးနော် ... ဖြေရမယ့် စာမေးပွဲတွေရှိသေးရင်လည်း အားလုံး ချောချောမွေ့မွေ့ အောင်မြင်ပါစေ ဗျာ ... ။
ကိုယ်တွေကတော့ ရေတောင် မကူးတတ်ဖူးး)
Captain tusk?.. ဟားဟားဟား၊ ရှာရှာဖွေဖွေ စဉ်းစား တတ်တယ်ဗျာ...၊းD ကျေးဇူးပါပဲနော်..၊
အခုလို လာရောက် ချီးမြှင့်တာ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ...၊း)
ကျနော် ကျခဲ့ဖူးတဲ့ စာမေးပွဲ တစ်ခု ရှိတယ်ဗျ၊ ဂျီတီအိုင် ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲပါ..၊
သင်္ဘောပိုင်း လုပ်တယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းမှာပဲ၊ သင်္ဘောတွေကို ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာကြည့်ရင် တခြား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်တွေနဲ့ မတူတဲ့ အချက်တွေ အများကြီးပဲနော်..၊
ဟား..တယ်မိုက်ပါလား၊ Pearl Habor မှာ ရေငုပ်သင်္ဘော စီးခဲ့တာဆိုတော့၊ အလုပ်အကြောင်း အဆင်ပြေတိုင်း ရေးကြည့်ပါ့မယ်၊ အမလည်း စာပြန် မရေးတော့ဘူးလား...? လုပ်ပါဦး?း) ဂုဏ်ပြုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်ဗျာ..၊
ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ၊ အင်း.. မသက်ဝေ ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုJack London လို စာတွေ အများကြီးရေးပြီး Jack Sparrow လို ဝတ်စုံနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်မှပဲဗျ၊ ၂ ယောက် စလုံးကလည်း သင်္ဘောပေါ်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဆိုတော့...၊းD
ကျေးဇူး တင်ပါတယ်နော်၊ သဲထိတ်ရင်ဖို ရှိတယ်ဆိုလို့ ရေပြင်ပေါ်မှ လျှို့ဝှက်သဲဖို ဇတ်လမ်းများ ဆိုပြီး ရေးကြည့်ရင် ကောင်းမလားလို့ ခပ်နောက်နောက် တွေးနေမိတယ်ဗျ...၊း)
အင်း.. ရောဂါ လက္ခဏာ တွေကတော့ claustrophobia ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံနေပါလား၊း) ကျနော့် မိတ်ဆွေ တွေထဲမှာလည်း ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့သူတွေ ရှိတယ်ဗျ၊ သူတို့ကတော့ ဓါတ်လှေကား ရှောင်ကြတယ်၊ claustrophobia က agoraphobia နဲ့စာရင် ဘာမှ စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ ဘူးဗျာ..၊း)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ၊ လောလောဆယ်တော့ ဘာ စာမေးပွဲမှ မဖြေချင်သေးပါဘူး၊ holidays ပဲ သွားချင် နေတယ်၊း) ကျနော် ကြားဖူးတာက လူတစ်ယောက်ကို ရေကူးတတ်စေချင်ရင် ရေထဲသာ တွန်းချလိုက် ဆိုလား ...၊းD
စာမေးပွဲ အောင်တယ် ဆိုတာ ဝမ်းသာစရာပါ အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ
ကျနော် ကတော့ စာမေးပွဲ ဆို ဘာမှ မဖြေချင်တော့ဘူး
ံHello Mr. Captain,
ရုတ်တရက်တော့ နည်းနည်းကြောင်သွားတယ်။ အလုပ်များ ပြောင်းလုပ်မလို့လားလို့။ ပြီးမှ သဘောပေါက်တယ်။ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအပေါ်
အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် လေးစားပါတယ်ဗျာ။
ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ခင်ဗျား..၊ ကျနော်လည်း စာမေးပွဲ တွေ သိပ်မဖြေချင်တော့ပါဘူး..၊
အခုလို အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ၊ အလုပ်က လိုအပ်တာ ဆိုတော့လည်း တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ရတာပါပဲဗျာ...။း)
Félicitation! chemin à parcourir.......
ကောင်းတယ်...မတတ်သင့်တဲ့ပညာဆိုလို့ တစ်ခုမှ မရှိဘူးမဟုတ်လား...ကဲ ကက်ပတိန်ကြီးနဲ့ သဘောင်္သေးသေးလေးတို့ရဲ့ စွန့်စားခန်းကို စောင့်ဖတ်မယ်ဗျား...
တတ်ထားတော့လည်း မမှားဘူးလို့ ပြောကြတာပါပဲဗျာ၊ လာလည်တာ ကျေးဇူးပါဗျား....။း)
အကိုရေ အောင်မြင်မှုအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့..အရောက်နောက်ကျတဲ့ အတွက် ခွင့်လွတ်ပါလို့....:):) နောက်ထက်လည်း ကပ္ပတိန်ရဲ့ အတွေးအကြုံ လေးတွေ ရေးပြပေးပါလို့..
စာမေးပွဲအောင်တဲ့အကြောင်း ဖတ်ရတာ အရသာရှိလိုက်တာ။ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ် ကပ္ပတိန်ကြီး :))။
ကျမလဲ စာမေးပွဲပြီးတော့ အောင်စာရင်း မျှော်ရမယ့်ဒုက္ခရှိသေးတယ်။ ကိုညီလင်းသစ်ရေးသလိုပဲ ဖြေနေတုန်း တချက်ကလေး မမှားလိုက်နဲ့ ပူလောင် ယောက်ယက်ခတ်ပြီး အကုန်မေ့ကုန်တော့တာပဲ။ အသက်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး စာမေးပွဲကိုတော့ ကြောက်တုန်း။
"ဒါပေမဲ့ ကျနော် အောင်ပါတယ်"လို့ ကိုညီလင်းသစ်လို "ဒါပေမဲ့ ကျမအောင်ပါတယ်"လို့ ရေးလိုက်ချင်စမ်းပါဘိရှင် ... ။
တောင်းပန်စရာ မလိုပါဘူး ညီမရာ..၊ ဒီလိုပဲ အဆင်ပြေမှ သွားလာဖတ်ရှုနေကြ သူတွေချည်းပါပဲ၊ ပုံမှန်လာလည်တာကိုပဲ ကျနော်က ကျေးဇူးတင် မဆုံးပါဘူး...၊
ဂုဏ်ပြုတာ ကျေးဇူးပါနော်၊ မမေဓာဝီလည်း စာမေးပွဲ အောင်မှာ အသေအချာပါ၊ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်၊ ဘလော့ဂ်ကို ပိတ်ပြီး သူတင်ကိုယ်တင် အပြင်းအထန် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သူရဲ့ ရှေ့မှောက်ကို အောင်မြင်မှုက မလွဲမသွေ ရောက်ကိုရောက်လာရမှာ....။
Ehhhhh... excited for tomorrow presentation... So I come again to read your excitement here... :(
သင်္ဘောနဲ့ ပင်လယ်ကို အလည်ထွက်ဖို့များ